Codsiga aqoonsiga Falastiin ee QM iyo kala hadalka Maraykanka | Somaliska
Isbuucaan waxaa xarunta Qaramada Midoobeey ee magaalada New York ka taagan arin xiiso leh oo u dhaxeysa madaxweynaha Falastiin Maxamud Cabas iyo Maraykanka iyo Israel oo dhinac ah. Cabaas ayaa soo hordhigaya codsi ku wajahan QM in ay aqoonsato dowladnimada Falastiin oo ay xubin buuxda ka noqdaan ururweynaha aduunka.
Falastiin ayaa hada waxay ka haysataa QM boos korjooge kaliya ah (Observer status) oo ay awood u leeyihiin in ay qudbooyin soo jeediyaan isla markaana ay dhagaystaan qudbadaha kale balse aysan lahayn wax awood codeyn ah. Maxamud Cabaas ayaa doonaya in golaha Amaanka ay aqoonsadaan Falastiin si loola mid dhigo Israel.
Haddii la aqoonsado Falastiin ayay wax badan ka badaleysaa awoodooda siyaasadeed. Dhulka ay hada Israel ka haysato Falastiniyiinta ayaysan wax dacwo ah ka keeni karin balse haddii la aqoonsado waxaa u suurto galaya in ay ku dacwoodaan in ay yihiin wadan madax banaan oo wadan kale oo QM ka mid ah uu haysto.
Maraykanka ayaa wacad ku maray in haddii Falastiin ay hesho 9 cod oo ka mid ah 15 cod ee Golaha amaanka in uu isticmaali doono awoodiisa vitooda. Obama ayaa ku andacoonaya in ay Falastiiniyiintu marka hore heshiis la gaaraan Israel inta aysan QM imaan balse dowlada Israel ee uu hogaamiyo ninka xag jirka ah ee Binyamin Netanyahu ayaan dooneyn in ay Falastiiniyiintu dowlad noqdaan ama dhulkooda dib u helaan.
Sanadkii hore xiligaan ayay ahayd markii Obama uu QM ka hor sheegay in uu filayo in sanadka soo socda uu ku soo dhaweeyo QM dowlad Falastiin ay yeelato isagoo hadana ku goodinaya in uu viito saari doono arintii uu shalay sheegay in uu soo dhaweynayo. Obama ayaa waxaa saaran cadaadis weyn oo kaga imaanaya dhinaca Aqalka odayaasha Maraykanka oo ah kuwo aad u jecel Israel. Obama ayaa sidoo kale doonaya in uu qanciyo Yuhuuda ku nool maraykanka si ay ugu codeeyaan doorashada soo socota.
Si kastaba ha ahaatee, Falastiiniyiinta ayaa waxaa u furan haddii Maraykanku viito saaro codsigooda in ay mid kale u gudbiyaan Fadhiga loo dhanyahay (General Assembly) halkaasoo ay u baahanyihiin 3 meelood 2 meel in ay helaan cododka wadama aduunka iyadoo la filayo in ay tiradaas ku heli karaan si fudud. Balse haddii ay tiradaas helaan ayaysan helayn xubinimo buuxda ee QM balse waxay helayaan wax loo yaqaan (Non-member state) oo ah wadan aan xubin ahayn balse midaan lafteeda ayaa kor u qaadeysa awoodooda siyaasadeed Maraykankuna viito kuma leh Fadhiga loo dhanyahay. Sweden ayaa la filayaa in ay u codeyso aqoonsiga Falastiin haddii la soo hordhigo Fadhiga loo dhanyahay.
Jimcaha ayaa la filayaa in Maxamud Cabaas uu gudbiyo codsigiisa dowladnimo balse maraykanka iyo Israel ayaa isku dayaya in aysan taasiba dhicin iyaga oo hada bilaabaya sheekooyin raqiis ah sida in Israel diyaar u tahay wadahadal toos ah balse taas waxaa diiday Cabaas.
Dhinaca kale Xamaas oo xukunta Gaza ayaa iyagu ka biyo diiday sheekadaan oo aan la dhacsaneyn aaditaanka QM . Xamaas ayaa sheegay in aan loo baahneyn in ay baryaan xaqooda balse ay xoog ku soo dhacsadaan.
Kooxda Somalia Barafka oo goolkii ugu horeeyay dhalisay
aniga waxaa ila saxsan in cabaas uu iska dhaafo iska dhaafo inuu ka hadlo madax banaani, sababtoo ah xamaaz oo ah alshabaabka falastiin ayaa hadhow ku soo jeesaneyso shacabka falastiin, oo xasuuqayaan ileen argagixiy o ma xishootee xukun ayey uga dhegantahay. laakiin ragga cabaas uu hogaamiyo waa rag macquul oo la fahmi karo. anyway mareykanka waxaan leenahay si loo badbaadiyo shacabka falastiin waa in laga ilaaliyo madax banaani hadii kale dagaal sokeeye oo awooda la isku qabsanaayo ayaa ka dhexbilaabanaya waana la iloobi doonaa cadaawadda yuhuuda. sida anagaba aan u iloowney cadaawadda itoobiya oo aan iskugu soo jeesanahay markey naga baxeen. oo hadda itoobiya qaarkeen ay u yaqaanaan walaal saaxiib la ah somalia. saasoo kale ayaa imaan doonta falastiiniyiin u yaqaano yuhuuda iney walaal yihiin hubna waa la iskugu dhiibaa
insha alaah way helayaan xaqooda hadii rabi idmo waa qalad in wadan lagumaysto gaalada iimaankay la yihin jag hoppas att de ska få eras rattighet
Insha’Allah Waxaba ugama Fadhino Aqoonsi Maraykan , maxaa yeelay Yahuud iyo Maraykan waa Dameer iyo labadiisa Dhegood .
Ninkaa Kore ee Abbe watana , in walaalahaaga Muslimiinta ah ee Dhagaxaanta ku dagaalanta ee Masjid Aqsa difaacaa ayaad Argagaxiso leeda , kaliya Hubso Magacaan Micnihiisa , Yaa wax Argagaxiya , macanaha , waxaan filaa haddaad Xamaas argagaxiso tiri Yahuudana in aadan Argagaxiso u aqoonsanayn ?
awood ilaah baa leh omaba iyo inta la midka ah toona awood malaha falastin ha aaminaan allaha wayn hana ku tashadaan awoodooda oo kaliya QM.USA.EU, IYO inta kale ee soo raacdaba waa gaalo raalina kama aha xornimada iyo mustaqbalka falastiin . cabbaaas kaan aad arkaysaana waa dabadhilifka ugu wayn mustaqbalka kaliya ee ay leedahay falastiin waa ururka XAMAAS guushana allaaha siiyo ummadda dhibaataysan ee reer falastiin jajniya OGADENIA IYO dhammaan intii la gumeysto meel walba oo ay joogaan wabillaahi towfiiq
asc dhmaan waad salamntihiin
doolada use ma dooneeso in falastiin la aqaaonsado
waayo waa garabka isr,il
waaxaan rajeenyaa in ee helaan 9 wadn oo u codeeyo
insha,allaah falastiin guul ayaan u rajeenyaa
falastin hanolato wxanrajayn inay helan codkya donayan walalaha falastin wa dhibanyihin alow ka qad inta wdan oo sisa codka wxay noqndona kuwa ugu qalisna adunka uguna cadalad wanagsna wayo gumaysiga gumadka ka dhacaya ayay diden marka maraykan wala ogyahay awrkisu kukacsnayaha waxas
awood ilah ba shegtay dadka adunkan kufanay awoda ilah ba ujeda falastina wa cimro arintedu iyo imtixan ilahay kuwii kugulaysta hakdhigo insha alah
marka hore waad mahadsantihiin akhristayaasha somaliska.com
marka labaad waxaan idin waydiiyay FALASTIIN umbaad u ducaynaysaan ee miyayna idinka mudnayn inaad u ducaysaan walaalihiina kale ee dhibaataysan sida SOMALIA , OGADENIA oo runtii uu haysto gumaysi ka daran kan falastiin haysta oo aan adduunku ka war qabin iyo kuwa badan oo adduunka ku dhibataysan oo kale sida jajnia bal horta ducada ka billaaba dhulalaka somaliyeed ee ay dhibaatadu ka jirto sida dhulka soomaalida OGADENIA ee uu cadowga ETIOPIA haysto wabilaahi towfiiq bye